संविधानमा बढि अधिकारको कुरा गर्ने को ? (फोटो फिचर) – Gulmiews
संविधानमा बढि अधिकारको कुरा गर्ने को ? (फोटो फिचर)
६ श्रावण २०७२, बुधबार २१:०९ Raju Gautam
गुल्मी, साउन–६ । पञ्चायत कालमा पनि उहि नै थियो गाउँको शासक । वहुदल आएर पनि मण्डले रुप धोई पखाली गरेर फेरी उहि गाउँको एक नम्वर जन नेता बन्यो । माओवादी जन युद्धमा ज्यान जोगाउन सदरमुकाम र राजधानीमा बसेर कान न्याना पा¥यो । विस्थापितका नाममा लाखौं सरकारी रकम पनि कुम्लायो । त्यस पछि युद्ध विराम भयो । शान्ति सम्झौता पछि उसको फेरी दिन फिरे । उ गाउँमा फर्कियो । ग¥यो फेरी नेता गिरी । बन्यो फेरी उहि हिजोको त्यही मण्डले महान लोकतन्त्रवादी नेता । खै के भन्ने त्यस गाउँका ति गरिव जनता मुर्ख हुन कि वा उनीहरुको बाध्यता हो अहिले सम्म उसैलाई नेता मानेका छन् र जे काम परे पनि उसैको पाउ मोल्ने गरेका छन् ।
खास भन्ने हो भन्ने उसमा राजनैतिक निष्ठा छैन् । हेर्दा कुनै एउटा पार्टीको उसले खोल ओढे पनि काम पट्याउनका लागि जहाँ जुन दलको नेता भेट्यो उसै सीत साख्खे हुन्छ । उसलाई घरमा नपुग केहि छैन् । जिजु वाजेको पाला देखि प्रशस्तै सम्पत्ती छ ।
त्यसको पचासौं मुरी धान फल्ने खेत छ तर उ रोपाईको दिन पाखैबाट रमाईलो हेर्न पुग्नु वाहेक अघि पछि पाईलो टेक्दैन् । वाजेका पाला देखि बानी लागेको दुई चार जना कुमालहरुलाई उति बेलै दुई चार हजार के ऋण दिएको थियो त्यसैबाट कजाई राखेको छ । यसरी उसको खेत वारी देखि घरको सवै काम गरी दिने तिनै कुमाल र गाउँका केहि दलितहरु पनि भएकोले उसले मज्जाले छोरा छोरीलाई शहरमा राखेर पढाएका छ र आफुले पनि फुकेर सधै गाउँको भलाद्मी बन्न पाएको छ ।
त्यसैले पनि गाउँका स–साना मन्दिर देखि ठुलो कोट, मोटर बाटो , खाने पानी, वन जंगल, जल, अन्य स्थल लगातका सवै उपभोक्ता समितिको हर्ताकर्ता उहि छ । त्यस्तै सरकारी निकाय र त्यस गाविसमा रहेका अन्य संघ संस्थाको संञ्चालक समितिमा पनि उसैको वोल वाल छ । विसौं वर्ष देखि एउटै कोट मन्दिरमा पुजा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष उनै वसेको सवैलाई छर्लङ्गै थाहा छ । विद्यालय त मानौं कि उसैको विर्ता हो । पछिल्लो चरण त्यसको अध्यक्ष बन्ने मौका गुम्ने देखेर उ अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको कुरा पनि कसैबाट छुपेको छैन् । त्यस्तै स्थापनाकाल देखि नै स्वास्थ्यचौकीको अध्यक्ष उहि नै हो ।
अड्डा अदालतमा उसले प्राय सवै कामहरु एक कल फोनमैं गर्ने गरेको हुन्छ । पञ्चायत काल देखि वहुदलका पालासम्म जिल्ला सभापति, सिडियो लगायतका हाकिमहरुलाई घरबाट घिउ मह, खसी पाठा समेत पुराउँथ्यो र गाउँ देखि जिल्लासम्म उसैको थुक विक्थ्यो । त्यसैको व्याज खाई रहेको छ भनौ कि उसलाई अहिले पनि जिल्लाका हर्ताकर्ता सवैले चिन्छन् । जसले डर लाग्दा बलात्कारका घटना देखि अन्य अपराधिक घटनालाई समेत गाउँमै झ्यासमिस पार्ने पहुँच राखेको छ ।
त्यति मात्र होईन । उसका मुखाले भनौ सत्रुता साँध्ने त्यहाँ कोही छ भने उसले अनेक तानावाना वुनेर जेल हलाउने वा दुई दिन मात्रै भए पनि प्रहरी कस्टडीको चिसो भुँई खुवाउँछ । तर निर्दोष हुँदा हुँदै पनि जो जसले चिसो भुँई खायो वा जेल प¥यो उसैलाई थाह हुन्न कि म निर्दोषलाई फसाउने त्यही फटाह हो भन्ने कुरा ।
बरु उसै कहाँ आफ्ना परिवारजनलार्ई पाउ मोल्न पठाउँ छ त्यो जेल वा प्रहरी कस्टडीबाट मुक्ती पाउन । उसले गाउँका धेरै जनालाई निर्दोष हुँदा हुँदै पनि चोरको विल्ला भिराएको छ । कसैलाई वलात्काकारी,कसैलाई अपराधी बनाउँने उहि हो । अनि वषौं देखि यौन शोषणमा परेकी, वा कसैको गर्भ धारण गरेर न्याय खोज्न सदरमुकाम तर्फ हिड्न थालेकी महिलालाई रोकेर दुई चार हजार क्षति पुर्ति दिलाएर अन्याय गर्ने कार्यमा समेत उसैको भुमिका रहन्छ ।
उसले भुमिहिनहरुलाई भुमि र घरवास नहुनेहरुलाई वास दिनु पर्छ भनेर कहिल्लै गाउँ परिषदमा कुरा उठाउन्न । खाली उसको घर र खेतवारीको पायक पार्ने मोटरबाटो आफ्ना छोरा वुहारीले पढाउने स्कुलमा पैसा हाल्ने कुरामा सधै पाखुरा निमोठेको हुन्छ । उसले महिला, दलित अपाङ्गा लगायत लक्षित वर्गका लागि छुट्टाईने रकममा सधै आँखा गाड्छ । भरसक उनिहरुलाई नपरोस् । त्यस रकम सवै हिड्ने बाटो, सवैले खाने पानी र सवैका छोरीले पढ्ने स्कुल भन्दै उतै तिर खर्च गर्ने जनमत बनाउ छ ।
उसका गतिविधी, उसले उठाउने कुराको आशय राम्ररी बुझ्ने हो भने उसले पछाडी परेको वर्ग समुदायलाई कहिल्लै माथी उठ्न दिन्न । कति पापी बैगुनी हो उ ? छिमेकका दलितले उस कहाँ जोत्ने, अन्य मजदुरी गरी दिएको थियो र पो उसका छोरा छोरीले शहरमा बसेर बढ्न पाएका थिए र उ आफु पनि भलाद्मी बन्न पाएको थियो । उसलाई राम्ररी थाह छ त्यो दलित, त्यो कुमाल त्यो माझीले सरकारी सुविधा पाउने हो भने भोली आफुलाई टेर्दैन् । आफ्नोमा हलो कोदालो पनि गर्दैन् ।
त्यसैले उसले दलित जनजाती लगायत पछाडी परेको समुदायलाई राज्यले दिने गरेको आरक्षणको विरोध गर्छ । साठी वर्षे बृद्ध भत्ता समेतको उसले विरोध गर्छ । अव भन्नुस् उ र उ जस्तै पृष्ठभुमि बोकेका मान्छेहरुले दिएको सुझावका आधारमा बन्यो भने कस्तो संविधान बन्ला र ति सदियौं देखि पछाडी परेका समुदायले कहिले मुक्ती पाउलान ? चिन्ता यसैमा छ ।
यसर्थ सोमवार र मंगलवार गुल्मीका तिन वटै क्षेत्रमा संविधानको पहिलो मस्यौदा माथि सभासदहरुबाट सुझाव संकलनका क्रममा जे जस्तो देखियो त्यसैको चित्रण र चिन्तन गरिदै छ । प्हिलो कुरा त गुल्मीका तिन वटै क्षेत्रमा भएको सुझाव संकलनमा सासद सचिवालयका अधिकृतहरुले गराएको उपस्थितीको डाटा नै हेर्नुहोस् कुन जाती, वर्ग समुदायको उपस्थिती कति छ ? त्यसले प्रष्ट पार्ने छ कि त्यही सुझावको वहुमतलाई आधार मानेर नयाँ संविधान बन्ने हो भने यो देशका सदियौं देखि पछाडी पारिएका वर्ग समुदायलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको अधिकार समेत कटौती हुने छ ।
तिन वटै क्षेत्रका सुझाव संकलन स्थलमा रहेका मानिसहरुको उपस्थिती हेर्दा लाग्थ्यो त्यो कुनै पार्टी विशेषको कार्यक्रम हो । अन्जानमा आएर केहि सर्व साधरणहरु ट्वााल्ल पर्दै हेरेर बसेका बाहेक अधिकांश राजनैतिक दलका अगुवा कार्यकर्ता अनि तिनै दलमा आस्था राख्ने शिक्षक वुद्धिजीवि र पञ्चायतकाल देखि गाउँको नेतृत्व लिएर बसेका धनि पुँजीपतिहरुकै उपस्थिती बढि थियो ।
ति युवाहरु जसले जुन दल विचारमा आश्था राखे पनि परिवर्तन चाहन्छन् र पछाडी परेको वर्ग समुदायको उत्थान र अधिकारका पक्षमा संविधान लेखियोस् भन्ने चाहन्छन् उनिहरुको उपस्थिती न्युन् थियो । अझ महिलाहरु कम्तीमा दुई सय जना पुरुषका विचमा मुस्कीलले छ सात जना देखिन्थ्यो ।
दलका एकाध नेता एवं नेतृ वाहेक सर्वसाधरण दलित, जनजाती समुदाय र किशान, गरिव, मजदुरहरुको उपस्थिती र उनिहरुको आवाज कम उठेको थियो । पालै पालो माईक्रोफोन माग्ने – तान्नेहरुले सवै भन्दा पहिला चर्को स्वरमा हिन्दु राज्यको माग गर्दै थिए र संघिय राज्यमा अखण्ड लुम्विनी हुनु पर्ने सुझाव दिदै थिए ।
अनि अधिकांश शिक्षकहरुले मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अनिवार्य शैक्षिक योग्याता निर्धारण गरिनु पर्नेमा जोडदार आवाज उठाउँदै थिए । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानिनु पर्नेहरु धेरै थिए भने क्षेत्र नम्वर ३ को सिमलटारीमा भएको सुझाव संकलनमा एक मात्र व्यक्ति ईस्मा रजस्थलका विरबहादुर नेपालीले गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर मानिनु पर्ने माग गरेका थिए ।
जति वेला पनि सुझाव दिने माईक्रोफोन तिनै पुरुषहरु र तिनै अगुवा कार्यकताहरुको मात्रै हातमा देखेपछि यसै पंक्तिकारले मञ्चमा बसेका सांसद सचिवालयलाई चिट लेखेर दिदै भन्यो–‘ महिला र पछाडी परेको समुदायको हातमा माईक्रोफोन पर्न सकेन ।’ त्यो चिट सांसद सचिवालयका अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले सभासद गोकर्ण विष्टलाई दिए । त्यो हेरेर सभासद विष्ट अलि गम्भीर हुँदै टोलीको ध्यानाकृष्ट गराउँदै थिए । त्यस पछि माईक्रोफोन मञ्च वाहिर ट्वालल्ला परेर हेरी रहेका दलितहरु तर्फ गयो तर ति सवै दलितहरु बोल्न लजाउने हाँस्ने मात्रै गरीरहे । मलाई धिक्कार जस्तो लाग्यो र उनिहरु संग झोक्कीदै भने–‘ नबोल्ने भए किन आएको त ?’
जवाफमा मरभुङ्ग ३ की मनकुमारी सुनारले भनिन् –‘ हामी त यस्तो बोल्नु पर्छ भन्ने थाह पाएर आएको होईन, गोकर्ण विष्ट आ’छन् रे हाम्रो मोटर बाटोमा पैसा हाल्दीन्छन कि भनेर आएका हौ । ’ उनि सहित मरभुङ्ग र पारी सिर्सेनी, घमिर र ईस्मा तर्फबाट आएका दलितहरु संविधानका लागि सुझाव दिन नभई आफ्ना नेता विष्टलाई भेट्न आएको पाईएको थियो ।
उनिहरु मध्ये धेरै जसो मञ्च वाहिर गालामा हात लगाएर बसी रहेका थिए । टिठ लाग्दो मुहार लिएर वास्ता न पस्ता गरेर बसेका ति दलितहरु त्यति वेला मात्र अलि कान थापेर सुने जति वेला दलितलाई मात्र निक आरक्षण ? भन्ने आवाज गाउँका ठुला बडा भनिनेहरुबाट निस्कीयो ।
चुनावका बेला तिमीहरुको उत्थान र अधिकार आगमी संविधानमा सुनिश्चीत गर्न हाम्रो पार्टीलाई भोट देउ भनेका तिनै नेताहरुबाटै त्यस्तो सुन्दा उनिहरु छक्क परे तर यो पक्तीकारले भने सहन सकेन् । यसले माईक्रोफोन मागेर तिनै नेतालाई सोध्यो –‘तपाईहरुले हिजो ति दलितहरु संग भोट माग्न जााँदा के भन्नु भएको थियो र आज के भन्दै हुनुहुछ ? ’
त्यस अघि खाली धर्मका मात्रै कुरा गर्नेहरु संग यसले आग्रह ग¥यो र भन्यो खै तपाईहरुले भुमि नभएकालाई भुमि, वास नभएकालाई वास जस्ता आधारभुत कुरा आगमी संविधानमा सुनिश्चीत हुनु पर्छ भन्ने माग गरेको ? ’
समथल मलिलो फाँटमा प्रशस्त खेत भएकाहरुको आवाज निकै उठ्यो त्यहाँ । तर त्यही नजिकै अम्मरपुरमा उनिहरुको फाँटमा वषौं देखि हली, मजदुरी गर्ने कुमालहरुको आवाज उठ्न सकेन । सायद उनिहरु तिनै ठुलावडाको फाँट वा वारीमा काम गर्दै थिए र त्यहाँ आउन भ्याएनन् । उनिहरुको दुई महिना खाना पुग्ने जमिन छैन् । कसैको वास नै छैन् । उनिहरुका छोरा छोरीहरु हिड्न सक्ने उमेर हुन थाले देखि तिनै गाउँका पुँजीपतिको घरमा गोठालो बस्न जान्छन् ।
अनि शहरमा रहेका उनै ठुलाबडाहरुको छोरा छोरी र अन्य आफन्त कहाँ भाँडा माझ्न पनि तिनै कुमालका छोरा छोरीहरु पुगेका हुन्छन् । तम्घास वुटवल, पोखरा देखि काठमाण्डौका अधिकांश होटलहरुमा पुग्नुुहोस् त्यहाँ अधिकांश त्यही अमरपुरका कुमालका छोराछोरी भेटिने छन् ।
उनका वावुहरु विसौं, तिसौं वर्ष सम्म तिनै गाउँका नेता समाज सेवी भनिने ठुला बडाहरुको हलीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनिहरुलाई कजाएर उनिहरु नेता हुने, शहरमा छोराछोरी पढाएर डाक्टर ईन्जीनियर बनाउने र सरकारी जागिरमा छिराउने, विकासित मुलकमा पठाउने तर ति कुमालहरुको उन्नती होस् भन्ने बारेमा कहिले सोच्ने ? त्यो सोच्नु त परै जाहोस् उनिहरु लगायत पछाडी परेका समुदायलाई अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकार र सुविधा समेत खोस्नका लागि पाखुरा निमोठ्नेहरुको नियत छर्लङ्ग छ कि– ति समुदाय माथी उठे भने हामीकहाँ मजदुरी गर्ने को ?
मजदुहरुको न्युनतम ज्याला निर्धारण गरिनु पर्छ भन्ने जम्मा एक जनाले मात्र माग उठाए । हिजो तिनै कुमाल, तिनै दलित बस्तीका घर घरमा गएर विभिन्न आन्दोलनमा उतार्ने दलका नेताहरुले किन संविधानको सुझाव संकलन गर्ने स्थानमा बोलाउन सकेनन् ?
क्षेत्र नम्वर ३ मा धेरै जना दलित लगायतका विभिन्न समुदायहरु भुमिहिन छन । त्यस वारेमा आवाज उठेन् । गएका थिए हिजो सर्वहाराका पक्षमा जन युद्ध लडेका भन्ने माओवादीका केहि नेताहरु पनि तर उनिहरुले पनि विगतमा आफैले उठाएको क्रान्तिकारी भुमिसुधारको कुरा उठाएनन् ।
कसैले भने सिंङ्गो फाँट नै ओगटेर नेता बन्ने, शिक्षक, वुद्धिजीवि र बरिष्ठ समाज सेवी कहलाउन रुचाउने तर जसले ति फाँटमा मजदुरी गरेको छ उसलाई सधै दवाउन खोज्ने ? त्यस विरुद्ध संविधान बने पनि भोली कुनै न कुनै दलले आन्दोलन छेड्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
खाली धर्मको कुरा गरेर एक मानवले अर्को मानवलाई अपमान गर्ने, सधै होच्याउने, सधै श्रम शोषण र दमनमा राख्ने मानसिकता अझै टुटेको रहेन छ भन्ने कुरा सुझाव संकलनका क्रममा तिनै ठुला वडाहरुको व्यक्त विचारबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । यस जिल्लामा न्युन संख्यामा भए पनि मुस्लीम छन् । क्रिश्यचन धर्म पनि अंगिकार गर्नेहरु छन् । उनिहरु पनि स्वतन्त्र पुर्वक वाँच्न पाउनु पर्छ । तर हिमालय उच्च माध्यामिक विद्यालय हस्तीचौरका प्राचर्य जस्ता विध्वान व्याक्ति दधिराम पन्थीले समेत धार्मिक स्वतन्त्रता हुनु पर्छ भन्ने सोच राखेनन् ।
उनले चर्को स्वरमा हिन्दु राज्य हुनु पर्ने माग गरे । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य जस्ता नेता महेन्द्र भण्डारीले समेत दलितलाई आरक्षण दिन नहुने सुझाव दिए । यो समाजका त्यस्ता युवा नेताहरुले त त्यस्तो आवाज उठाउ छन भने गाउँका ति वृद्धहरुले पुरानै खालको रिती रिवाज रही रहोस् र कानुन पनि हिजो कै जस्तो बनोस भन्ने सोच राख्नुलाई त स्वभाविकै मान्नु प¥यो ।
समग्रमा सुझाव संकलन केन्द्रमा जसको आवाज उठ्नु पर्दथ्यो त्यसको आवाज उठ्न सकेन् । जसलाई अग्रगामी संविधान बन्नु पर्ने आवस्यता थियो त्यसै वर्ग र समुदायका मान्छेहरुले त्यस स्थानमा जाने आवश्कतै देखेनन् वा भ्याएन् मलाई यसैमा दुर्भाग्य लागेको छ ।
यसर्थ सुझव संकलनमा आउनु भएका सभासादहरु, विशेषतः तपाईहरुका कार्यकर्ताले जे जस्ता मागहरु उठाए त्यसका आधारमा ‘संविधान बन्यो भने त्यसले देशलाई अग्रगमन तर्फ होईन पश्चगमन र फेरी अशान्ति तर्फ धेकेल्ने छ भन्ने कुरामा ध्यानकृष्ट गराउन चाहन्छु ।
अधिकांश पुरातनवादी सोच राखेका मानिहरुको जमात थियो पहिलो दिनमा । उनिहरुद्धारा व्यक्त विचारले यहाँका दलित जन जातीहरु रुष्ठ छन भने कुरा त दोश्रो दिन उनिहरुद्धारा आयोजित कार्यक्रमबाट प्रष्ट बुझी हाल्नु भएको छ ।
किन अकस्मात दोश्रो दिन यहाँका दलित र जनजातीहरुले सभासदहरु संग बेग्लै सुझाव संकलन कार्यक्रम राखे ? उनिहरुको आरोप थियो –पहिलो दिन अधिकांश मानिसहरु धर्म निरपेक्षेताका पक्षधर थिएनन् । खाली हिन्दु राज्यको माग गर्ने र दलित जनजाती लगायत पछाडी परेको समुदायलाई राज्यले दिईएको सुविधा र आरक्षणको विरोधी थिए ।
त्यस विरुद्ध आदिवासी जनजाती महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष हिरासिंह सारङकोटीले भत्र्सना गरेका छन् । उनले सभासदहरु गोकर्ण विष्ट, चन्द्र भण्डारी, दिलशोभा पुन र कमला बिश्वकर्माहरुका सामु भनेका थिए कि –‘ हिजो सुझाव संकलनका क्रममा हामी यहाँका सदियौं देखि पछाडी परेका दलित र जनजातीहरुलाई ठेस पुग्ने गरी जे जस्ता अभिव्यक्तिहरु सुनिए त्यसले हामीहरुलाई ठेस पुगेको छ त्यसको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं । ’
त्यस्तै यहाँका सवै राजनैतिक दलका दलित संगठनहरुले पनि सयुंक्त निर्णय गरी दलितहरुलाई झन पछाडी पार्ने खालका सुझाहरुको विरोध गर्दै आफुहरुका लिखित मागहरु सभासदहरु समक्ष पेश गरेका छन् । उता नेपाल आदिवासी युवा महासंघ गुल्मीले यदि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र संविधानमा नभए माओवादीले बन्दुक विसाए पनि अर्को दल खोलेर फेरी बन्दुक उठाउने चेतवानी दिएको छ ।
संघका जिल्ला अध्यक्ष गिरीसिंह माहाकिमले सभासदहरुकै सामु भने–‘ यहाँका दलित र जनजातीहरुलाई पछाडी पार्ने खालका जे जस्ता मागहरु उठेका छन् यदि त्यसैको आधारमा संविधान बने त्यस विरुद्ध माओवादीले बन्दुक विसाए पनि फेरी अर्को माओवादी बनेर बन्दुक उठाईने छ ।’
यस प्रति सवै सभासदहरुको ध्यान जाओस् । गाउँका हिजो देखिका भुरे टाकुरेहरुको पुरातनवादी सोचका आधारमा संविधान बन्यो भने यसले शान्ति होईन मुलकलाई अशान्ति तर्फ धकेल्ने छ भन्ने सुझव एक नागरिकका हैसियतले यो पंक्तिकारले दिन चाहन्छ ।
हेरौं तस्वीर आफै बोल्छ सुझाव संकलन स्थलमा कसको उपस्थिती कति छ ? महिला कहाँ छन् ? पाखै बसेका दलितहरुको मुहारले के भन्छ ?